बन्दाबन्दीमा घरभाडा छुटः भयो त कार्यान्वयन ?
कंगना रनौतले आयुष्मान खुरानालाई किन भनिन् 'चाप्लुस आउटसाइडर' ?
अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा कोरोनाबाट २ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
बेलायतमा दुई महीनापछि एक दिनमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए
‘जिउँदै मरे जस्तो लाग्छ तैंले छोएर’
संक्रमण बढेसँगै सकिए भेन्टिलेटर सर्भिसेज्‌का सबै सामग्री, सहयोगको अपिल
रिपोर्ट बुधबार, वैशाख ३१, २०७७
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरबेटीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, तीन महीनाको ब्यांकको ऋणको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने र घरबेटीले तीन महीनाको भाडा छुट दिनुपर्ने भाडावाल सरोकार समाजको माग छ ।
अहिलेसम्म नेपालभर करीब १५ सय घरबेटीले कम्तीमा एक र बढीमा दुई महीनाको घरभाडा छुट गरेको समाजका अध्यक्ष विष्णुजंग बस्नेत बताउँछन् । सरकारले बन्दाबन्दीपछि घरभाडा छुट दिन गरेको आग्रह अनुसार ती घरधनीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि अधिकांश क्षेत्र ठप्प छन् । यो समय ज्यालादारी मजदुरले मात्र नभई अन्य कतिपयले पनि रोजगारी गुमाए । कतिपयको मासिक पारिश्रमिक कटौती भयो । त्यहीकारण सरकारले घरधनीहरुलाई भाडा छुट दिन आग्रह गर्‍यो ।
१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाडा छुट दिने घरधनीलाई बहालकर नलिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले घरधनीहरुलाई चैत महीनाको भाडा छुट दिन अनुरोध गरेपछि केहीले घरभाडा नलिने घोषणा गरे । कतिपयले एक महीनाको भाडा मात्रै छुट दिएका छन् भने कतिपयले दोस्रो महीनाको पनि दिइसके ।
भाडावालाहरु भने कम्तीमा तीन महीनाको भाडा छुट दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले घरबेटीलाई भाडा छुट दिन गरेको अनुरोधसँगै घरबेटीहरुले भने गुनासो गर्न थालेका छन् । उनीहरुले घर बनाउँदा ब्यांकबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरिदिए मात्रै भाडा छुट दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।
भाडावाल सरोकार समाजका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार शहरी क्षेत्रमा निर्मित घरहरुमध्ये करीब ८० प्रतिशत ब्यांकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका छन् । भाडावाल सरोकार समाजले त्रिपक्षीय समझदारीको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ ।
बस्नेत भन्छन्, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरबेटीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ, घरबेटीलाई तीन महीनाको ब्यांकको ऋणको ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ र घरबेटीले तीन महीनाको भाडा छुट दिनुपर्छ ।” भारतको दिल्लीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरबेटीलाई सरकारले सहयोग गर्ने र भाडावाललाई तीन महीनाको भाडा छुट दिने निर्णय भइसकेको छ ।
घरभाडाबाट नै जीविकोपार्जन गर्ने घरबेटीलाई राज्यले हेर्नुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “तीन महीनाको भाडा छुट दिँदा नै घरबेटीहरु आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन्छन् भन्ने छैन । तर, केहीले घरभाडाबाट नै जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले हेर्नुपर्छ ।”
शान्तिनगरमा घर भएका प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेल दम्पती।
जसले घरभाडा छुट दिए
प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलले काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेलाई चैत र वैशाख दुई महीनाको भाडा छुट दिएका छन् । बन्दाबन्दी शुरु भएपछि उनले चैतको भाडा नलिने निर्णय गरेका थिए । तर, बन्दाबन्दी लम्बिदै ५ जेठ पुगेपछि वैशाखको भाडा पनि नलिने निर्णय गरेका छन् । अहिले उनको घरमा एउटा परिवार भाडामा बस्छ ।
पोख्रेल भन्छन्, “म पनि घरभाडामा बसेर नै पढेँ । घरभन्दा टाढा भाडामा बस्नुको दुःख थाहा छ । त्यसैले छुट गरेको हुँ ।” घर भाडा उठाएरै खानुपर्ने अवस्था नरहेकाले दुई महीनाको भाडा छुट दिने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।
उनका छोरा, बुहारी पनि जागिरे छन् । पोख्रेल भन्छन्, “मलाई घरभाडाबाटै खानुपर्ने अवस्था नभएकाले छुट दिएँ । मेरो घरमा बस्ने बहिनीको बच्चा सानो छ । यस्तो बेला केही नसके पनि भाडा नलिएर सहयोग गरौं भनेर हो ।”
पोख्रेलको घरमा सुमित्र अर्यालको परिवार पुस २०७४ सालदेखि भाडामा बस्न थालेको हो । उनी एक ब्यांकमा कार्यरत छिन् । १० वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएकी उनले २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि नियमित घरभाडा तिरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, “बन्दाबन्दी शुरु भएपछि घरबेटी आन्टीले म्यासेज पठाएर चैत महीनाको घरभाडा छुट दिएको जानकारी दिनुभयो, वैशाखमा पनि छुट भएको म्यासेज आयो । पैसाभन्दा पनि महामारीमा उहाँहरुले देखाउनुभएको मानवीयताबाट प्रभावित भएका छौं ।”
कीर्तिपुरकी रीनाकुमारी केसीले पनि बन्दाबन्दी शुरु भएपछि चैत महीनाको एकतिहाई भाडा छुट दिएकी छिन् । घरको एउटा मात्रै फ्ल्याट भाडामा दिइएको केसीको घरमा एक परिवार भाडामा बस्छ ।
बन्दाबन्दीपछि उनको घरमा भाडामा बस्नेहरू पनि काममा जान सकेनन् । केसी भन्छिन्, “हामी आफै पनि लामो समय भाडामा बसेका थियौं, घर नहुँदा र बाहिर बस्दा हुने समस्याको अनुभव छ । त्यसैले सकेको भए पूरै छुट दिन्थ्यौं, हाम्रो पनि बाध्यता भएर थोरै छुट दिएका हौं ।” केसी परिवारले घर बनाउँदा ब्यांकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न अझै बाँकी छ ।
कीर्तिपुरकी रीनाकुमारी केसी र उनका श्रीमान दीपेन्द्र केसी ।
मुकुन्दप्रसाद ढकालले कोटेश्वरमा पसल प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका नौ वटै सटर भाडामा छन् । त्यहाँ पसल गर्नेहरुलाई चैत महीनाको भाडा छुट दिएका छन् । उनको कोटेश्वरकै हिमाली मार्गस्थित घरमा बस्ने ६ परिवारलाई पनि चैतको भाडा छुट दिएका छन् । उनी भन्छन्, “पसल खोल्न पाएनन्, व्यापार भएन । घरमा बस्नेहरु पनि काममा जान पाएनन् भनेर स्वविवेकले एक महीनाको भाडा छुट दिएको हुँ ।”
उनले नौ वटा सटर र घरमा गरी करीब रु.१ लाख ३५ हजार बराबर छुट दिएको बताउँछन् । वैशाखको छुट दिन भने मुश्किल भएको उनको भनाइ छ । ढकाल भन्छन्, “आफू पनि खानु प¥यो । त्यसैले एक महीनाभन्दा बढी छुट गर्न मुश्किल छ ।”
ढकालको सटरमा पसल गरिरहेकी अन्जना इछमफूल एक महीनाको सटरको भाडा तिर्न नपर्दा धेरै राहत मिलेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “आफैले बुझेर एक महीनाको मात्रै भएपनि छुट दिनु म जस्तो साना व्यवसायीका लागि ठूलो राहत हो ।”
घरबेटीहरुको आफ्नै समस्या
केही घरबेटीले भने बाध्यताले घरभाडा लिनुपरिरहेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले दिने घरबहाल कर छुट मात्रै पर्याप्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ । भाडा छुट दिनका लागि घर किन्दा वा बनाउँदा ब्यांकबाट लिएको ऋणको मासिक व्याज छुट गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
काठमाडौं मैनमैजुकी मिरा अधिकारीले एक वर्षअघि ब्यांकबाट ऋण लिएर साढे तीनतलाको घर किनिन् । उक्त घरको पहिलो र दोस्रो तलामा पाँच परिवार भाडामा बस्छन् । अधिकारी कार्यालय सहयोगी हुन् । भाडा नलिने हो भने उनले ब्यांकबाट लिएको ऋणको किस्ता चुक्ता गर्न सक्दिनन् । त्यसैले ब्याज मिनाहा नभएसम्म भाडा छुट दिन नक्ने बाध्यता भएको उनी सुनाउँछिन् ।
मोरङ घर भई ललितपुरको सानेपा बस्ने तीर्थबहादुर कार्कीले वैशाखको पनि भाडा बुझाइसकेका छन् । उनी २०७३ सालदेखि अहिले बसिरहेको घरमा भाडामा छन् । घरबेटीले भाडा नमागे पनि आफैले दिएको उनी बताउँछन् ।
एक निजी कम्पनीमा कार्यरत कार्कीले घरबेटीको अवस्था बुझेर समयमा नै भाडा दिने गरेका छन् । साढे एक तलाको घरमा माथिबाट घरबेटी र तल्लो तलामा कार्कीको सहित दुई परिवार बस्छन् ।
घरबेटीको अन्य आयस्रोत नभएकाले आफूले भाडा नदिए अप्ठ्यारो पर्ने उनी बताउँछन् । कार्की भन्छन्, “मेरो घरबेटीले कहिले पनि भाडा माग्नुहुँदैन । आफैले जानेर दिने हो । उहाँहरु दुई जना हुनुहुन्छ । अन्य आयस्रोत छैन । कसरी छुट माग्नु ?”
सोमबार, साउन २६, २०७७ ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु: साओ पाउलोको विमान दुर्घटनाको क्षतिभन्दा ५०० गुणा बढी
सोमबार, साउन २६, २०७७ विभागको अनुगमन र उपभोक्ताको भोगाइ- 'भाटभटेनीको ठगी रोकिएन'